မီးဖိုချောင်သုံး Faucets တွေကို ဘယ်လို အစားထိုးမလဲ။ | WOWOW Faucets-WOWOW Faucets
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / မီးဖိုချောင် faucets အစားထိုးဖို့ဘယ်လို?
2020 / 11 / 09 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 5891 0
မီးဖိုချောင် faucet ကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဟာတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျော်ဖြတ်ရမယ်။ မီးဖိုချောင် faucet ထည့်သွင်းအစားထိုးထက်တစ်နည်းနည်းနဲ့ပိုမိုလွယ်ကူသည်သော်လည်း။ သို့သော်သင်ကနည်းစနစ်များကိုသိလျှင်မီးဖိုချောင် faucet ကိုအစားထိုးသည်လည်းမခက်ခဲပါ။
ခေတ်မီကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်သင်၏မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းအရဖလှယ်ရမည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေကအဲဒီလိုလုပ်ကြတယ် မီးဖိုချောင် faucet သည်အမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့် တင်၍ ကြာရှည်ခံသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမီးဖိုချောင်အသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လျှော့ရောနှောထိပုတ်ပါ အဲ့ဒါက ၅-၁၀ နှစ်လောက်ကြာတယ်။
သင့်ရဲ့ faucet ကိုမီးဖိုချောင် faucet ထဲကိုအနက်ရောင်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲ။ ဤဆောင်းပါး၌၊ သင်၏မီးဖိုချောင် faucet ဟောင်းကိုအစားထိုးရန်သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စလိုက်ကြစို့
မီးဖိုချောင် faucet မှုန်ရေမွှားနှင့်အစားထိုးပုံကို
တစ် ဦး faucet အစားထိုးအရေးပါသောအိမ်ပြန်တိုးတက်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မီးဖိုချောင်အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ဘုံဖြစ်သော်လည်းခက်ခဲသည်။ အမှန်မှာ၊ မီးဖိုချောင်ပါသောမီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားသည့်အနက်ရောင်ရှူးဆွဲအားအစားထိုးလိုက်သည်ကခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။
သင့်ကိုမီးဖိုချောင် faucet ကိုမှုတ်ဆေးဖြင့်အစားထိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ပို့ဆောင်ပါရစေ။
နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုတွင်း faucet တစ်ပေါက်စုပ်အပေါ်အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည် ဒါပေမယ့်တစ်ပေါက်တစ်ပေါက် faucet နှစ်ခုအပေါက်စုပ်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီသင်၏နစ်မြုပ်မှုအောက်ရှိသွားသည့်တွင်းအရေအတွက်မည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့စုပ်အပေါက်ပေါ်အခြေခံပြီးမီးဖိုချောင် faucet ယူလာပါ။
အဆင့် ၂ - ရေပေးဝေမှုကိုပိတ်ပါ
သင်တပ်ဆင်မည့်မည်သည့်ရေယာဉ်ကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ စုပ်အောက်ရှိအဆို့ရှင်များရှိရေပေးဝေမှုကိုပိတ်ပါ။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်မရှိပါကသင်အိမ်၏ရေပေးဝေမှုတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ထားရမည်။
အဆင့် ၃ - ရေပေးဝေရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားပါ။
တစ် ဦး ချိန်ညှိလိမ်ဖဲ့ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြု။ faucet ကနေရေပေးဝေရေးလိုင်းများကိုဖြုတ်။ faucet ကိုအစားထိုးနေစဉ်၎င်းသည်သင့်အားရေဖိအားမှသင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဓာတ်အားလိုင်းများကိုပိတ်ထားသည့်အခါကက်ဘိနက်၏အောက်ဘက်ရှိပိုက်လိုင်းကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အနှောင့်အယှက်အားလုံးကိုရေပေးဝေရေးလမ်းကြောင်းမှဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ရေသည် supply line သို့အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
အဆင့် ၄ - faucet ကိုဖယ်ရှားရန်ရေငုပ်၏အခွံမာများကိုဖြေပါ
သင့်ရဲ့ faucet အဟောင်းကိုဖယ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်ကက်ဘိနက်ရဲ့အောက်ဘက်မှာလိမ်ဖဲ့ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်စုပ်ခတ်အခွံမာသီးကိုဖြေပါ။ အခုတော့သင့်ရဲ့ဟောင်းနွမ်း faucet စုပ်၏ဆက်သွယ်မှုကနေဖြည်းဖြည်းချင်း။ ထို့နောက်သင်၏အင်တုံမျက်နှာပြင်မှအမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဆေးကြောပါ။
အဆင့် ၅။ faucet ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုစုစည်းပါ
မီးဖိုချောင်စုပ်၏ဆက်သွယ်ထားသောအချက်နှင့်အတူ faucet ၏အပိုင်းပိုင်းစုရုံး။ ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ၎င်းသည်တစ်လက်ကိုင် faucet ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ လက်နှစ်ချောင်း faucets ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းအပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်သည်၎င်းကိုချိန်ညှိရန်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုပြလိမ့်မည်။
အဆင့် ၆။ faucet ကိုတွင်းနက်ထဲထည့်ပါ
အဆိုပါ connector များနှင့်အတူ faucet အပိုင်းပိုင်းပူးတွဲပြီးနောက်ချိန်ညှိလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်အတူ connection ကိုတင်းကျပ်။ ပြီးနောက် faucet ကိုမှန်တွင်းထဲသို့မှန်မှန်ထည့်ပါ။
မီးဖိုချောင် faucet ၏ပါးစပ်အပေါ်တစ် ဦး မှုတ်ထည့်ပါ။ အဆိုပါစုပ်၏ထည့်သွင်းအမှတ်နှင့်အတူ faucet နှင့် faucet နှင့်အတူ sprayer တင်းကျပ်။
အဆင့် ၇ - ရေပေးဝေရေးလိုင်းကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သည်သင်၏စုပ်ထဲသို့မီးဖိုချောင် faucet installed ပါပြီ။ အခုဆိုရင်ရေပေးဝေရေးလိုင်းကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ရေပေးဝေရေးလိုင်းအားချိန်ညှိနိုင်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ရေပေးဝေမှုကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် ၈။ ယိုစိမ့်မှုနှင့်ရေဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ
သငျသညျတပ်ဆင်ပြီးနောက်ချက်ချင်း faucet ကို run ခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမည်။ ရေပေးဝေမှုတွင်ယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်ပြတ်တောက်မှုတစ်ခုရှိပါကဆက်သွယ်ထားသောအချက်၏ဝက်အူကိုတင်းကျပ်ပါ။
သတိရပါ, တပ်ဆင်ပြီးနောက် faucet စစ်ဆေးခြင်းတစ်ခု option ကိုပေမယ့်လုပ်ဖို့အရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် 9: စုပ်သန့်ရှင်းရေး
အဆိုပါ faucet ကိုအစားထိုးပြီးနောက်, သင်စုပ်၌အပျက်အစီးများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါ faucet အသုံးမပြုခင်စုပ်သန့်ရှင်းရေး။
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်စုပ်ထဲမှာ faucet ကိုအစားထိုးရန်အလွန်ခက်ခဲပါသလား မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ ငါတို့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပြီးသင်၏မီးဖိုချောင်၏ faucet ဟောင်းကိုမည်သည့်အကူအညီမှမပါဘဲအစားထိုးပါ။
သင်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုချက်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆေးကြောသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်တွင်အားကောင်းသောမီးဖိုချောင်သုံး faucet တစ်ခုရှိရမည်။ အစွမ်းထက်သောမီးဖိုချောင် faucet သည်ရေကိုမြင့်မားစွာစီးဆင်းစေသော faucet ဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်မှရေပိုက်ဟောင်းသည်လိုချင်သောရေကိုမပေးနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏မီးဖိုချောင် faucet ဟောင်းကိုအသစ်များအစားထိုးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခေတ်မှီသောမီးဖိုချောင် faucet တစ်ခုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးရန်အကြံပြုပါသည် လျှော့ရောနှောထိပုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအင်အားကြီးမားသောမီးဖိုချောင်ရေကန်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါ ၀ င်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်များသည်သင်၏ faucet ဟောင်းကိုမည်သည့်အမှားမှမပါဘဲအစားထိုးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင် faucet ဟောင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ချက်ပြုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။
ရှေ့သို့ :: အဘယ်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့မီးဖိုချောင် Faucet တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစေ နောက်တစ်ခု: မီးဖိုချောင် Faucet ၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ?
2022 / 01 / 16 147
ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဒီစံနှုန်းတွေက သင့်ရေချိုးခန်းမှာ ပစ္စည်း4မျိုးထက် ပိုနေတယ်ဆိုရင် Co...